मलेसियामा कहिले देखि जान पाउछन नेपाली श्रमिक ? - ramechhapkhabar.com
मलेसियामा कहिले देखि जान पाउछन नेपाली श्रमिक ?
दोहा – नेपाली श्रमिकको श्रम गन्तव्य रहेको मलेसियाले नयाँ विदेशी कामदार लिने भएको छ । कोरोना महामारीको कारण लामो समयदेखि बन्दका कारण कामदार अभाव भएपछि नयाँ कामदार लिन लागिएको हो।
मलेसियाका गृहमन्त्री दातोक श्री हमजाह जैनुद्दीनले पछिल्लो समय कोरोना महामारीले मलेसियाको प्लान्टेशन सेक्टरमा कामदारको अभाव भएको भन्दै अब विदेशी कामदार भर्ना गरिने बताएका छन् ।
नयाँ विदेशी कामदारले मलेसिया प्रवेश गर्दा अनिवार्य ७ दिन सरकारले तोकेको होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने छ। क्वारेनटाइनको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने जनाइएको छ ।
मलेसियाले नोभेम्बरबाट भने केही क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकका लागि खुला गर्ने भएको छ । मलेसियाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका र उच्च स्तरका पर्यटकको आवागमनलाई प्राथमिकता दिने भएको हो ।